चीन उम्दा काल्पनिक लोकप्रिय गुलाबी सादा सुरुचिपूर्ण सीमाना थर्मल शल दुपट्टा महिला कारखाना र आपूर्तिकर्ता | gusta
भव्य काल्पनिक लोकप्रिय गुलाबी सादा सुरुचिपूर्ण सीमाना थर्मल शल दुपट्टा महिला
लंबाई को शैली:
1 टुकडा / पाली थैला
ग्राहकको लोगो स्वीकार
500000 टुकडा / प्रति महिना मोहरे
मात्रा (टुक्राहरू) 1 - 360 > 360
Est। समय (दिन) 35 बातचीत गर्न
बस्तु संख्या। WB04
ढाँचा र रंग अनुकूलन स्वीकार
रेशम पर्दा मुद्रण / गर्मी स्थानान्तरण मुद्रण / डिजिटल मुद्रण / पूर्ण रंग मुद्रण /
सेवा स्वीकार OEM र ODM
वितरण समय 45-60 दिन
1 तपाईं भुक्तानी कस्तो स्वीकार गर्न सक्छन्?
हामी दृष्टि भुक्तानी मा टी / टी या एल / सी स्वीकार छन्।
2. तपाईंले म तपाईंलाई खरीद अर्डर अघि मुक्त नमूना प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
म दु: खी, हामी मुक्त नमूना, नमूनाको दुई पटक मूल्य आवश्यक हुनेछ .और तपाईं तपाईं पहिलो अर्डर पछि फर्केर स्वीकार गर्दैनौं छु।
3. यहाँ वास्तविक नमूना र चित्रहरू बीच कुनै पनि रंग फरक छ?
सबै तस्वीर वातावरण भएकोले कम्प्युटर मनिटर गरेको रंग फरक, यो अलि कति रंग फरक हुन सक्छ, वास्तविक नमूनाहरू लिइएका हुन्। हामी यसको लागि आफ्नो समझ मूल्यांकन गरिन्छ।
4 किन सामान स्टक बाहिर हुनेछ?
हामी शेयर मा सबै उत्पादन राख्न हाम्रो सबै भन्दा राम्रो हुनेछ। तर केही तातो बिक्री छोटो समयमा बेच्न हुनेछ, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई फेरि तयार गर्न समय आवश्यक छ। पनि हामी बासी हटाउनेछ र निस्कने हरेक सिजन ल्याउन ताजा, केही शैली पनि वेबसाइट ले बाहिर गरिनेछ।
5 थोक मूल्य लागि न्यूनतम आदेश मात्रा के हो? यो न्यूनतम मिश्रण आदेश मात्रा फरक डिजाइन संग 100pcs छ।
6 तपाईं कसरी ढुवानी गर्छन्?
हामी एक्सप्रेस वा तपाईं लागि FORWARDER व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्रबन्ध गर्नु अघि प्रत्येक वितरण शुल्क तपाईंसँग जाँच गरिनेछ।
7 कहिलेसम्म म सामान प्राप्त गर्न सक्छन्? स्टक मा माल, हामी तिनीहरूलाई तपाईं जहाज भने 3days.If भित्र स्टक मा, हामी तिनीहरूलाई तयार 15-20days आवश्यक छ। एक्सप्रेस लागि: म बाहिर पठाउन पछि आफ्नो हात गर्न 30 दिन: 3-5 दिन आफ्नो हात म पठाउन पछि बाहिर, FORWARDER लागि।
म पछि रूमाल प्राप्त रूमाल जस्तै छैन भने म कसरी गर्न सक्नुहुन्छ 8?
तपाईंले प्राप्त र रूमाल त्यहाँ गुणस्तर समस्या छ भने, हामी unconditionally बाहेक माल अनुरूप हाम्रो company.If द्वारा ग्राहक 7Days बाहिर गुणस्तर समस्या उल्लेख भुक्तानी गरिनेछ तपाईं, सेवा आदान प्रदान प्रदान गर्नेछ, प्रयोग गर्न गरेपछि pls 7Days भित्र रूमाल जाँच आफ्नो सामान छैन फर्काइन्छ। हाम्रो कम्पनी र कारखाना भ्रमण स्वागत छ!
अघिल्लो: महिलाहरु फूल वार्म दुपट्टा 100% Viscose सादा दुपट्टा शल
अर्को: Online Exporter Cashmere Scarf Shawls - Nepal Large Pashmina Malaysia Shawl Without Crystal – Gusta
Hijab दुपट्टा अनि शल
Lambswool दुपट्टा शल
ऊन दुपट्टा शल
कालो नयाँ डिजाइन सस्ता सादा जाँच साइकल दुपट्टा
रंगीन पलिएस्टर सुन्दर कपास पुष्प दुपट्टा
अनुकूलन शीतकालीन देश Crumple डिजाइनर प्रेरित ...
अनुकूलन लोगो Crinkle कपास क्रेप Viscose दुपट्टा
अनुकूलन अङ्क छापा अनंत Crinkle काँटाले बुन्नु दुपट्टा
पुराना शैली Viscose Tassel Volar पनरोक ...